KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောတာမလာဘော တာဝန်မှ အနားယူဖွယ်ရှိ
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောတာမလာဘော တာဝန်မှ အနားယူဖွယ်ရှိ
KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောတာမလာဘော တာဝန်မှ အနားယူဖွယ်ရှိ	ဖနိဒါ	| အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၄၄ မိနစ်	ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောတာမလာဘော သည် တာဝန်မှ အနားယူ နှုတ်ထွက်တော့မည်ဟု သိရှိရသည်။ တနလာင်္နေ့မှ စတင်ကျင်းပသည့် KNU ၏ ၁၅ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံ အဖွင့် မိန့်ခွန်းတွင် အသက် ၉၃ နှစ်အရွယ် စောတာမလာဘော က ၎င်း အနားယူတော့ မည့်အကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၁၄ ကြိမ်မြောက်ညီလာခံမှ စောတာမလာဘောအား ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ရာမှ အသက်အရွယ်နှင့် ကျန်းမာရေးအရနှုတ်ထွက်ခြင်း ဖြစ်မည်ဟု အမည်မဖော်လိုသူ KNU ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။“သူက အရွေးမခံတော့ဘူးလို့ ကျနော်ထင်တယ်။ သူက အသက်ကြီးပြီလေ။ မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ အခေါက်တောင် သူ့ကျန်းမာရေးက ချူချာတယ်ဆိုတော့ သွားရေးလာရေးမှာ ခက်ခဲတယ်” ဟု မဇ္စျိမကို ပြောသည်။ ယခုညီလာခံကို KNU ၏ တပ်မဟာ ၇ နယ်မြေ၊ ဘားအံခရိုင်၊ လှိုင်ဘွဲ့မြို့နယ် လေးဝါးတပ်စခန်းတွင် ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်ကြာ ကျင်းပမည်ဖြစ်၍ ညီလာခံ ပထမနေ့တွင် ဗဟိုကော်မတီ၏ လုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာများ၊ နိုင်ငံရေး အစီရင်ခံစာများကို တင်သွင်းခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။ ညီလာခံ နောက်ဆုံးနေ့တွင် KNU ၏ ခေါင်းဆောင်သစ်များကို ရွေးချယ်ရန် ပြင်ဆင်ထားသည်ဟု သိရသည်။ KNU မှ ထုတ်ပယ်လိုက်သည်ဟု ကြေညာခြင်း ခံရသော စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးဆေးဖိုး အား ညီလာခံ ကျင်းပချိန်ထိ မူလတာဝန်ကိုသာ ဆက်လက် တာဝန်ယူသွားမည် ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလက ကွယ်လွန်သူ KNU တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး (၂)လည်း ဖြစ်၊ ဗဟို တရားရေးဌာန တာဝန်ခံ ပဒိုစောဒေးဗစ်ထောနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဌာန တာဝန်ခံ ပဒိုရောဂျာခင် နေရာများတွင် အစားထိုးရန် လိုအပ်ဆဲ ဖြစ်သည်။ မူတူးဆေးဖိုးနှင့် ၎င်းတို့ နှစ်ဦးအား ဘားအံ့မြို့ ဗဟိုဆက်သွယ်ရေးရုံးဖွင့်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ KNU သည် နှစ်ပေါင်း ၆ဝ ကျော်ကြာ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် ရရှိရေးအတွက် အစိုးရ ခေတ်အဆက်ဆက် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးသဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ သည်။
KNU နှင့် အစိုးရ တပ်များ အပစ်ရပ် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးရန် ရန်ကုန်မှာ တွေ့ဆုံမည်	တိုင်းရင်းသားများ စုဖွဲ့မှုဖြင့် ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားရန် KNU လိုလား	ကချင်အရေး KNU နှင့် သမ္မတတို့ အဓိက ဆွေးနွေးဖွယ်ရှိ	KNU ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမည်	KNU ဥက္ကဋ္ဌသစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးဆေးဖိုး အား တင်မြှောက်လိုက်	ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် နောက်ပြန်မဆုတ်ရန် ရှမ်းညီလာခံ တိုက်တွန်း	မူတူးဆေးဖိုး KNU စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ယူဦးမည်	Who is Online
We have 205 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved